एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माधव नेपालको चुनौती-हामी केपी ओलीले फालेर फालिने मान्छे हौँ ? || राजनिति
एमाले अध्यक्ष ओलीलाई माधव नेपालको चुनौती-हामी केपी ओलीले फालेर फालिने मान्छे हौँ ?
आइतबार काठमाडौँ जिल्ला कमिटी घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले ओ‌लीसँग मिल्ने कुनै अवस्था नरहेको पनि दाबी गरे ।
नेकपा एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्न थालेपछि निलम्बनमा परेका नेता नेपालले आफ्नो मूल पार्टी नेकपा एमाले नै रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुनले नदिए विकल्प खोजौँला। विचार मिल्छ। मूल पार्टी यही हो । केपी ओलीले पार्टी नै कब्जा गरे भने छुट्टै कुरा हो।’
उनले एमालेका आफूभन्दा तलका सबै नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध चर्कोरुपमा उत्रिरहेको पनि बताए।
नेता नेपालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि आफ्नो पक्षमा आउन लागेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा पनि हामी बहुमतमा छौँ। वामदेव गौतम पनि हाम्रो पक्षमा आउँदै हुनुहुन्छ।’